I-KB4467682 - OS BUILD 17134.441 ITHOLAKALELA IWINDOWS 10 INGUQULO 1803 - I-WINDOWS 10
I-KB4467682 - OS Build 17134.441 itholakalela iWindows 10 inguqulo 1803
IMicrosoft ikhiphe okusha ukubuyekeza okuqoqekayo KB4467682 ye Windows 10 inguqulo 1803 (Ephreli 2018 Ukuvuselelwa), futhi iletha ukulungiswa okuningi kwamaphutha nokuthuthukiswa kokusebenza. Ngokusho kwenkampani efaka Ukuvuselelwa Okuqoqekayo KB4467682 Ishaya i-OS ku- Windows 10 Yakha i-17134.441 futhi ubhekane nezimbungulu eziningana ezifaka ukuphendula kwekhibhodi ukuphendula, izinqamuleli ezingekho ze-URL kwimenyu yokuqala, ukususa izinhlelo zokusebenza kumenyu yokuqala, izinkinga ngeFayile Explorer, amaphutha we-antivirus yenkampani yangaphandle, inethiwekhi, i-blue screen bug njll
windows 10 i-iTunes ayitholi i-iphone
Okuqukethwe umbukiso 1 Windows 10 Vuselela i-KB4467682 (OS Yakha i-17134.441)? ezimbili Landa Windows 10 Yakha i-17134.441
Windows 10 Vuselela i-KB4467682 (OS Yakha i-17134.441)?
Windows 10 isibuyekezo esiqoqekayo se-KB4467682 Landa futhi ufake ngokuzenzakalela kumadivayisi asebenza Windows 10 Ukuvuselelwa kuka-Ephreli 2018, okuguqula inombolo yokwakha kube Windows 10 Yakha i-17134.441. Njengokukodwa Isiza sokweseka seMicrosoft , ukubuyekezwa kwakamuva kokuqoqeka kuqukethe ukulungiswa kwamaphutha nokuthuthuka okulandelayo:
Ikhuluma ngendaba evimbela ukususwa kwamagama ezincazelo kwisichazamazwi seMicrosoft Office kusetshenziswa izilungiselelo.
Ikhuluma ngendaba ebangela i- I-GetCalendarInfo umsebenzi wokubuyisa igama lesikhathi esingalungile ngosuku lokuqala lwenkathi yaseJapan.
Ikhuluma ngezinguquko zendawo yesikhathi sesikhathi esivamile semini yaseRussia.
Ikhuluma ngezinguquko zesikhathi sesikhathi sesikhathi esivamile sasemini saseMoroccan.
Ikhuluma ngendaba yokuvumela ukusetshenziswa kwenkinobho edlule yomgqomo nokuhudula ukusebenza futhi iqinisekise ukuthi ukukhetha kwe-shim kubaluleke kakhulu kunokubhaliswa.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi iphedi yokuthinta enembile noma ikhibhodi iyeke ukuphendula ngenxa yenhlanganisela ethile yedokhi kanye nokuyekisa noma ukucisha noma ukuqala kabusha ukusebenza.
Ikhuluma ngendaba engahle idale ukuthi uhlelo luyeke ukuphendula ngemuva kokuvula, okuvimbela i-logon.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi iMicrosoft Word Immersive Reader yeqe ingxenye yokuqala yegama elikhethiwe lapho usebenzisa iMicrosoft Word Online kuMicrosoft Edge.
Ikhuluma ngendaba ngezinqamuleli ezingekho ze-URL kusuka kumenyu yokuqala.
Ikhuluma ngendaba evumela abasebenzisi ukuthi bakhiphe izinhlelo zokusebenza kumenyu yokuqala lapho inqubomgomo ethi “Vimbela abasebenzisi ekukhipheni izinhlelo zokusebenza kusuka kwimenyu yokuqala” isethiwe.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi i-File Explorer iyeke ukusebenza lapho uchofoza ifayela le- Vula inkinobho yesici Somugqa wesikhathi. Le nkinga yenzeka lapho inqubomgomo yeqembu ethi 'Vumela ukulayishwa kwemisebenzi yomsebenzisi' ikhutshaziwe.
Ikhuluma ngendaba evimbela abasebenzisi ekutholeni i-Ease of Access Isikhombi nosayizi wesikhombi ekhasini lohlelo lokusebenza lwe-Izilungiselelo nge-URI “izilungiselelo ze-ms: i-easofaccess-cursorandpointersize”.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi insizakalo yomsindo iyeke ukusebenza noma ingaphenduli ngenkathi kusetshenziswa ukulawula izingcingo, ukulawula ivolumu nokusakaza umculo kumadivayisi womsindo we-Bluetooth. Imiyalezo enephutha evela ifaka phakathi:
Iphutha lokungafani 0x8000000e ku-btagservice.dll.
Iphutha lokungafani 0xc0000005 noma i-0xc0000409 ku-bthavctpsvc.dll.
Misa iphutha le-0xD1 BSOD ku-btha2dp.sys.
Ikhuluma ngendaba lapho isoftware yenkampani yangaphandle ingathola khona iphutha le- 'ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES'.
Ikhuluma ngendaba engadala ukusetshenziswa kwememori ngokweqile lapho usebenzisa amakhadi we-smart.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi uhlelo luyeke ukusebenza ngekhodi yephutha, “0x120_fvevol! FveEowFinalSweepConvertSpecialRangesChunk”.
Ikhuluma ngendaba evimbela i-Application Guard ukuthi ingabhekabheki kwi-inthanethi uma ifayela le-proxy auto-config (PAC) kudivayisi lisebenzisa imibhalo ye-IP ukucacisa ummeleli wewebhu.
Ikhuluma ngendaba evimbela iklayenti le-Wi-Fi ekuxhumaneni namadivayisi we-Miracast® lapho isikhombi sesevisi esivunyelwe (SSID) sicaciswa kuzinqubomgomo ze-Wireless Network.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi ukuphrinta komcimbi kwe-Windows (ETW) kwehluleke lapho kusetshenziswa amaza wokuphrinta ngokwezifiso.
Ikhuluma ngendaba yokushintshwa kwesimo samandla ebangela ukuthi uhlelo lungaphenduli lapho luxhuma kumadivayisi we-eXtensible Host Controller Interface (xHCI).
Ikhuluma ngendaba engaholela esikrinini esiluhlaza okwesibhakabhaka kusistimu lapho kuqhutshwa isoftware yebench bench.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukuthi iwindi le-RemoteApp lihlale lisebenza futhi lisebusweni ngemuva kokuvala iwindi.
Ivumela ikheli elingahleliwe le-Bluetooth® Low Energy (LE) ukuzungeza ngezikhathi ezithile noma ngabe ukuskena kokungena kwe-Bluetooth LE kunikwe amandla.
Ikhuluma ngendaba ebangela ukufakwa nokusebenza kwamakhasimende kweWindows Server 2019 ne-1809 LTSC Key Management Service (KMS) okhiye bokubamba (CSVLK) ukuthi kungasebenzi njengoba bekulindelekile. Ukuthola eminye imininingwane ngesici sokuqala, bheka I-KB4347075 .
Ikhuluma ngendaba evimbela abanye abasebenzisi ekusetheni okuzenzakalelayo kohlelo lweWin32 kohlelo oluthile nezinhlanganisela zohlobo lwefayela kusetshenziswa i- Vula nge… umyalo noma Amasethingi > Izinhlelo zokusebenza > Izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo .
Ikhuluma ngendaba evimbela abasebenzisi ukuthi bavule amafayela wesethulo (.pptx) athunyelwe kusuka kuphrezentheshini ye-Google.
Ikhuluma ngendaba evimbela abanye abasebenzisi ukuthi baxhume kumadivayisi amadala, njengamaphrinta, nge-Wi-Fi ngenxa yokwethulwa kwe-multicast DNS (mDNS). Uma ungazange ubhekane nezinkinga zokuxhuma idivayisi futhi ukhetha ukusebenza kwe-mDNS okusha, ungavumela i-mDNS ngokwakha ukhiye olandelayo wokubhalisa: “HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Policies Microsoft Windows NT DNSClient mDNSEnabled (DWORD) = 1”.
Futhi, kunezinkinga ezimbili ezehlukene ezaziwa kulesi sibuyekezo esiqoqekayo se-KB4467682, zombili zizuze njengefa kusibuyekezo esedlule futhi iMicrosoft isebenza ngesinqumo futhi izonikeza isibuyekezo ekukhishweni okuzayo.
I-KB4467682 ingadala izingqinamba zeNET Framework futhi yehle ibha yokufuna kuWindows Media Player.
Ngemuva kokufaka lesi sibuyekezo, abasebenzisi bangase bangakwazi ukusebenzisa ifayela le- Funa ibha kuWindows Media Player uma udlala amafayela athile.
IMicrosoft ikhiphe nokuvuselelwa okuqoqekayo kwe-KB4467681 / KB4467699 etholakalayo Windows 10 1709 kanye no-1703 funda i-changelog lapha.
Landa Windows 10 Yakha i-17134.441
Isibuyekezo sakamuva esiqoqekayo se-KB4467682 (OS Build 17134.441) Landa bese ufaka Ngokuzenzakalelayo kumadivayisi asebenza ngo-Ephreli 2018 Buyekeza futhi uxhumeke kuseva ye-Microsoft. Futhi, ungakwazi ukuvuselelwa kweWindows kusuka ku-Amasethingi -> Ukuvuselelwa Nokuvikeleka -> Ukuvuselelwa kweWindows bese uhlola izibuyekezo.
ukufinyelela kunqatshelwe ukungakwazi ukuxhuma amawindi ephrinta 10
Iphakethe elingaxhunyiwe ku-inthanethi liyatholakala futhi kubhulogi lekhathalogi leMicrosoft lokulanda. Ungazilanda kusuka lapha.
ikhompyutha iphansi kwimemori windows 10 lungisa
amawindi10.0-kb4467682-x64.msu 794.7 MB
amawindi10.0-kb4467682-x86.msu 444.0 MB
Qaphela: ungalanda Windows 10 I-ISO yakamuva kusuka ku- lapha .
Uma ubhekana nobunzima Ukufaka lesi sibuyekezo esifana ne- “2018-11 Cumulative Update for Windows 10 Inguqulo 1803 yama-x64-based Systems (KB4467682) yehlulekile ukufaka, Ukufaka kufakwe” hlola Ukuxazulula inkinga nge-Windows umhlahlandlela.
awukho umsindo kumafasitela we-chrome 7
i-google chrome iyeke ukusebenza amawindi 10
amawindi ayi-10 ngeke avuke ebuthongweni
izinto okufanele zenziwe ngaphambi kokuthuthukela kumawindi 10